နှိုင်းယှဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် YANDEX နှင့် GOOGLE - GOOGLE က - 2019
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် Google နှင့် Yandex နှိုင်းယှဉ်ရန်
ကို Android operating system ကိုနီးပါးအားလုံးဗားရှင်းအခု desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ function ကိုအတူ, သင်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်ဘောင်ပေါ်အုပ်စုသည်လျှောက်လွှာ shortcuts တွေကိုတတ်နိုင်သမျှ။ သို့သော်လူတိုင်းမကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိ၏။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ Android အပေါ်ဖိုလ်ဒါအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်
device ကို drive ပေါ်တွင်လျှောက်လွှာ Menu ထဲမှာအဓိကမျက်နှာပြင်: Android ပေါ်မှာဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးရန်သုံးအခြေခံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးစီလုပ်ရပ်များတစ်မူထူးခြားတဲ့ sequence ကိုရှိပြီးစမတ်ဖုန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိအချက်အလက်များ၏တည်ဆောက်ပုံများဆိုလို။
Method ကို 1: Desktop ပေါ်မှာတစ်ဖိုင်တွဲ
ယေဘုယျအားဖြင့်အလျှင်းမဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ရှုပ်ထွေး။ ဖိုင်တွဲတစ်ခု Create စက္ကန့်မယ့်စုံတွဲတစ်တွဲရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်:
ဖိုလ်ဒါထဲသို့ပေါင်းစပ်ခံရဖို့ applications များရွေးချယ်ခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုမှာ, YouTube နဲ့ VKontakte ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်နှင့်မျက်နှာပြင်ကနေစက္ကန့်ဖြန့်ချိလက်ညှိုးကျော် drag ။ တစ်ဦးကဖိုင်တွဲကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးသည်။ ဖိုလ်ဒါအသစ်တစ်ခုလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းဖို့, တူညီတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ပါ။
ဖိုလ်ဒါအမည်အားပြောင်းလဲပစ်ရန်, သင်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကမ္ပည်းကို click ရမယ် "နာမည်တစ်ခုမပါဘဲ folder".
သငျသညျဖိုင်တွဲ၏အနာဂတ် name ကို print ထုတ်ချင်သောစနစ်ကကီးဘုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သမားရိုးကျ applications များနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့သူမ၏အမည်, တံဆိပ်အောက်မှာပြသနေသည်။
အများဆုံး launcher (desktop ပေါ်မှာခွံ) ခုနှစ်တွင်ဒက်စ်တော့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်း panel ကိုအပေါ်မသာ, ဖိုင်တွဲတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအတိအကျတူညီသောလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်။
အထက်ပါအဆင့်များလုပ်နေပြီးနောက်သင်သည်လက်ျာလျှောက်လွှာများနှင့်နာမည် folder တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပုံမှန်တံဆိပ်အဖြစ် Desktop ပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြန် Workspace ကိုမှဖိုင်တွဲထဲကနေ Element တစ်ခုရဲ့လုပ်, သင်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောရှိရာ app ကိုဆွဲယူရပေမည်။
Method ကို 2: လျှောက်လွှာ Menu ထဲမှာတစ်ဦးကဖိုင်တွဲ
စမတ်ဖုန်းလည်ပတ်မှုစားပွဲအပြင်, ဖိုလ်ဒါကိုလျှောက်လွှာ menu ကိုအကောင်အထည်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအပိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ရန်, သငျသညျအဓိကဖုန်း screen ၏အောက်ခြေ panel ကိုအပေါ်ဗဟို button ကိုနှိပ်ရပါမည်။
အားလုံးပစ္စည်းတွေဟာပလီကေးရှင်း menu ကထိုလမ်းကြည့်မရသတိပြုပါ။ သို့သျောလညျးကိုပင်သဏ္ဌာန်လျှင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်, လုပ်ဆောင်ချက်၏အနှစ်သာရပြောင်းလဲသွားသည်မဟုတ်။
လျှောက်လွှာ menu ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ထားတဲ့ Settings ခလုတ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပေါ်လာသော menu ကထဲမှာ, select လုပ်ပါ "ဟု New Folder ကို".
ဒါက window ကိုဖွင့်လှစ် "လျှောက်လွှာစိစစ်ရွေးချယ်ရေး"။ ဒီနေရာတွင်အနာဂတျမှာဖိုင်တွဲခံရမည်လျှောက်လွှာကို select နှင့်ကို click ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Save" ။
Folder ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါဟာနာမည်တစ်ခုပေးစေခြင်းငှါသာဖြစ်နေဆဲပင်။ ဒါကပထမဦးဆုံးအမှု၌ရှိသကဲ့သို့အတိအကျတူညီထုံးစံ၌ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
သင်လျှောက်လွှာ Menu ထဲမှာ folder တစ်ခုဖန်တီးရန်, ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ခေတ်မီစမတ်ဖုန်း, ဒီ feature က default အားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်တို့ကြောင့် Non-စံ Pre-ထည့်သွင်း operating system ကို shell ကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုဤစံကိုက်ညီလျှင်သင်ဒီ feature အကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့အတွက်အများအပြားအထူး Launcher ရဲ့တဦးတည်းကိုသုံးနိုင်သည်။
အသေးစိတ်: Android အတွက်ရေခွံ Wallpaper
drive ကိုအပေါ်တစ်ဦး folder ကိုဖန်တီးပါ
desktop ပေါ်မှာနှင့် launcher အပြင်, စမတ်ဖုန်းများ၏အသုံးပြုသူအားလုံး device ကိုဒေတာသိုလှောင်သော drive ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သင်ဒီမှာ folder တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပေမည်။ အများအားဖြင့်စမတ်ဖုန်း '' ဇာတိ '' ဖိုင်မန်နေဂျာအပေါ် installed, သင်ထိုသူတို့အဘို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကအပိုဆောင်း software ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အသေးစိတ်: Android အတွက်ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
အားလုံးနီးပါးကာကွယ်တွေနဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာတူညီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုလ်ဒါအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်။ ကအစီအစဉ်၏ဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ပါ အစိုင်အခဲ Explorer ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို:
Solid Explorer ကိုဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို Download လုပ်ပါ
ပွင့်လင်း Manager ကို, သင်က folder ကိုဖန်တီးလိုသည့်အတွက် directory ကိုသွားပါ။ ထိုအခါ button ကို click +.
ယင်းနောက် created ခံရဖို့ဒြပ်စင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုမှာ, "ဟု New Folder ကို".
Folder ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဒါဟာဖန်ဆင်းခြင်း၏အချိန်မှာပွင့်လင်းခဲ့သည့် directory ကိုအတွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ, ကဖွင့်လှစ်ပါကဖိုင်များကိုရွှေ့နှင့်အခြားလိုအပ်သောထိန်းသိမ်းရေးစေနိုင်သည်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Android ပေါ်မှာဖိုင်တွဲကိုဖန်တီးရန်မတူညီတဲ့မူကွဲရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်သည်မိမိလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်တဲ့ထုံးစံပါပဲ။ Desktop ပေါ်မှာ Folder တစ်ခုဖန်တီးရန်မည်သို့ဆိုကိစ္စတွင်အတွက်နဲ့လျှောက်လွှာ menu ကို၌၎င်း, drive ကိုအတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။
ဗီဒီယို Watch: How SEO Works. SEO RoadMap Simple Structure (သြဂုတ်လ 2019).